Mai Chibwe VekwaZimuto: Kumutsigwa Rhoji
Kurhojewa uvete hope chaidzo zvinoita here? Rega ndigotsanangura.
Ndinohwa vakawanda vachiti mumba mavo munhu anofumovhunza murume kuti wakandirhoja here usiku? Ipapo unenge wamuka uchisiririka urume saka kana usiri muroyi zvinoreva kuti murume aka topinza akakakudiridzira uvete.
Nyaya iripo apa ndeyokuti vazhinji tinopanana tivete. Kana wakavata nomurume paya usina chaunofunganya, hope dzinouya asi mese munoshanyarika muchipanana pokuvata. Mukadzi umwe noumwe ane INSTINCT yokuti kana akawana chombo chomurume chimire anoda kuchipinzwa maari. Hino kana muvete unokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvaunoita wakasvinura usingazivi kuti uri kuzviita.
Murume ane utano hwakakwana kana avete chombo chake chinomira kasere (8 times on average) usiku umwe noumwe chero avete ega mukadzi asipo. Nyaya iyi inotanga mokomana asati azvagwa ari mudumbu ramai vake. Kuzokura anenge achingomisa chombo avete. kozoti kana ave jaya otanga kuzvidiridzira aveta. Kana azokura aroora chombo chinongomira chete avete hope chaidzo. Hino pamwe iwe mukadzi wake unenge wakatomugonyerawo sezvamunoita makasvinura saka akangotangawo kumisa chombo iwe unozvihwa wosimudza gumbo sezvaunongoita wakasvinura iye kana iwe wopinza chombo. Vazhinji vedu kana changopinda pane chinotoitika chete. wozopepuka kuseni uchisinira urume.
Kozotizve murume akasvinura mukadzi avete ipapo murume apepuka akatomira nechekare. Anobva ada kuita asi asingadi kumutsa mukadzi. Vakawanda vanongoziva kuti ndikadai mukadzi anodai obva atopinza iwe uvete. Pamwe unomuka pamwe haumuki. Kana ukamika unomukira pakati pekunakigwa wobva wangopedza naye. Kana usina kumuka anongoitawo kusvika apedza iwe wozozviona kuseni.
Kozotizve iwe wopepuswa nokubaiwa baiwa magaro nechombo chimire wowana murume avete. Ndiri seni ndofambisa muviri kuti zviruramane ndosimudza gumbo ndozvipinzira ndega. Ndadaro ndotanga zvishomashoma kusvika tapedza. Kana akamuka kana akasamuka anotobatirirawo kuti pasaita akisidhendi.
Hino vamwewo vanoti kurhojewa uvete zvoreva kuti hauna kubvuma kurhojewa saka iRhepu. Ini sokuona kwangu kana uvete mujira rimwe chete nomurume wako wawakaroorana naye mese musina kupfeka, zvinoreva kuti mese muri kuti patazviwanira ngatiite. Hapana zvokuzoti umwe andirhepa izvo. menge magara mune nyaya dzenyu dzisina akagadzirisa. Kana makadaro chivata wakapfeka bhurugwa ne pyjama murume agare achitoziva kuti haudi.
Ko nyaya yokunyorova?
Unonyorova sei iwe uvete, kusvika pakuti murume anopinza uvete? Uyu mubvunzo wakanaka chose. Pane nyaya mbiri apa. Chokutanga kana mange mamboita pakunovata ukadiridzigwa unenge uchakanyorova nokuti urume hunotora nguva kubuda nokuti unenge wambohupiwa mukatikati. Kuzoti apinzezve uvete hazvikugwadzisi.
Chechipiri kana uvete paya muchikwizirana nomurume, muviri wemukadzi unokwiziwawo zvokuti vakawanda hava omi sezvamasikati, saka pamwe anokwanisa kungopinza pamwe haakwanisi, Ndipo unozopepuka achizama kupinza wobva wamuvhurira. Kozotizvi mushonga wekupinzwa zviri nyore kunyungurudisa muviri (relax) Kana uvete unenge wakapfavisa muviri chaizvo saka nechitubu chinenge chakapfava zvokuti anokwanisa kupinza.
ini handioni chakaipa pane kurhojewa ndivete. Kana asingadi kundimutsa ndezvake. Pamwe anongopinza orega kukoira tongoti uyu akapinza uyu akapinzwa asi pasina chiri kuitika. Zvinoita kuti murume ainze iwe ugotadza kumuka. Kana majaira kuvata mese, unongozomuka kana ava kuita basa zvonyanyonaka. Kazhinji usiku kudai hapana zvokuitana zvine masimba, munoita zvinyoronyoro wakafuratira murume uye wakagonya kuti anyatsopinda mese makavata nedivi rimwe chete. Munoti mapedza mese munodzokera pahope futi dzakawedzera.
Kana uchimukira kubasa zvinokwanisa kukukanganisa hope asi unojaira kusvika pakutoti nguva yaunochimutswa unopepuka usati wamutswa womirira umwe wako kuti amukewo. Zvakangofanana nezvinoitika kana wazvara mwana.Unomuka womwisa mwana mukaka wodzokera ahope.
Kana muri vanhu vanomukirana saizvozvo, Mukadzi gara une zvinhu zvako zvakakwana pamubhedha wako. Chokutanga iva nematawero makuru akawanda mumba. Woitazve zvimashitibheta zvidiki zvemaSINGLE bed zvakawanda. Musati mavata isa chichitibheta che single chakakurosa mubhedha chakasiya imwe nzvimbo kumusoro nokuzasi. Kana anenge achururuka usiku anochururukira pane kaka chete. Hananetsi kubvisa nokuwacha. Kana muchiri vechidiki mnokwanisa kumutsana zuva nezuva asi mamboita futi pakunovata. Saka kana ukasaronga zvakanaka unongogarowacha. Bheta kuwacha chishitibheta chidiki chete. Kana une tawero dzako dzakakwana unopukuta murume, iwe wozvipukutawo saka chokuwacha kapana. Asi dzimwe nguva chero ukapukuta, umwe wenyu anotovhinza chete mavata, womuka kuseni wowana pakavhinzigwa.
Isu vakadzi tisu tisina kwedu, Murume akasada zvokuvatana tinokomburena, akanyanyoda zvokuvatana tokumburena futi. Ini sokuona kwangu murume anoda kungovatana pese pese murume anofanira kuregwa achiita saizvozvo. Vakadzi vakawandisa mudzimba vanonyora vakashungurudzika chose vachibvunza kuti Ndodii nokuti murume ava nenguva asingamboratidzi kuti anodawo kuvatana neni. Kana murume achingoti akabva kubasa oda zvokuvata pasina chaitwa, tinotanga kufunganya kuti amwe pane kwaari kupiwa. Saizvozvo kana murume achida nguva dzese rega aite nguva dzese. Usataridza kuti haudi. Kana usingadi zvokumutswa, muudze musati mavata kuti unoda kumutswa nguvai kuti zvisanyanyonetsa pakuronga kwako. Asi kungozoti murume asakumutsa hazvina kunaka. Kana achida zvinhu kuseni mupe zvinhu zvake usati waenda kubasa. Rega umwe wako anakigwe kwete kungopa ma SANCTION pese pese.
Tikatarisa nyaya yokuroorana iyi tinoona kuti kurhojana chinhu chikuru chose chokuti kana mukatadza management yacho munokwanisa kugara musina mufaro.Munhu dzidza kufarira kupa kupfuura kupiwa. Varume garaiwo muchiziva kuti vakadzi venyu vanoda kuziva kuti munovada. Kwatiri, murume akasada kurhoja, tibva tafunga kuti rudo hapachina, zvinotidya pamoyo izvozvo. Murume chero asina zemongaaritsvake awane mukana wekuonekwa kuti paano bvisirana hembhe nomukadzi, akaona mukadzi asina hembhe aomira chombo. Isu tobva tafunga kuti ndini ndamisa. Zvine Saikoroji yakawanda pamamirire ezvinhu pamusha. Kana akasamira hake chombo asi akataura kuti ari kuda kuvatana, ndinombomiramirawo kuzama kumutsa zvivete.
Attitude dzenyu mese ndidzo dzinoita mufare kana kusafara mumba menyu. Ini mafungire angu ndeekuti murume wangu anofanira kuziva kuti muviri wangu ndewake kuti zvaanoda nawo wakewo ndewangu kuita zvandinoda nawo. Ndinotaura kana pane chanetsa asi ndinotaura murudo. Kukomburena hakuna kuipa asi ipa murume wako imwe nguva. Kuda kurhoja kwaari kuita zvinoreva kuti ane unga hunoda kubviswa.
Kuiswa muhope haisi Rape here nhai Chibs? What if ndikatsamwa then murume omirira ndarara oisa. hadi rape here iyi.
Handifungi kuti tingati iRAPE.Kana ndakaroorana nomunhu wandinovata naye mazuva ese ndingabva ndati chero paanoda rhoji ngaatange akumbira ini ndigobvuma here? Ini ndikabvisa hembhe ndopinda mumubhedha nomurume ndobatwa nehope handingazomuki kuseni ndoti murume akandibata chibharo. Chibharo hunge wahi vhura iwe usingadi kuvhura kwacho.Kana pasina akumutsa akati vhura iwe ukaramba hatingati chibharo. Kana pasina dzimwe nyaya dzaitika handingangotangi kuti ndarhepewa nomurume wangu, zvinenge zvaita sei.Ko musi wandinomupinzawo avete anofanigwa kudii nazvo? Ngatigarei zvakanaka nevarume vedu.Mukadzi mukuru ane mhuri haafanigwi kungotanga kufunga nezverhepu mumbamake pasina bhinya rapaza rikapinda.Murume wako harisi bhinya.